Yaasin Farey oo loo doortay xildhibaan Aqalka Hoose ah - Caasimada Online
Home Warar Yaasin Farey oo loo doortay xildhibaan Aqalka Hoose ah
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kursi ka mid ah Golaha Shacabka Soomaaliya, gaar ahaan xubnaha baarlamaanka kasoo galaya dhinaca dowlad goboleedka Galmudug.
Kursiga doorashadiisa la qabtay ayaa waxaa kusoo baxay agaasimaha KMG ee hay’adda NISA Yaasiin Farey oo la tartamay musharrax kale oo isku soo taagay kursiga HOP#067.
Natiijada soo baxday iyo guusha Yaasiin Farey ayaa aheyd mid horay loo sii oogaa, maadaama loo xiray kursiga, wuxuuna sidoo kale si dhow ugu xiran yahay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin.
Kursigan waxaa sidoo kale horay ugu fadhiyey ganacsadaha caanka ah ee Cadow Cali Gees oo muddo ka tirsanaa xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa doorashada Yaasiin Farey ay kusoo aadeysaa, iyada oo maalmihii u dambeeyey ay qaylo dhaan kasoo yeereysay mushariixiin uu ka mid ah taliyihii hore ee NISA Cabdiraxmaan Tuuryare oo ku eedeeyey Villa Soomaaliya inay afduubtay kursigaas.
Si kastaba, qaabka ay u socota doorashada ayaa waxaa walaac ka muujiyey musharixiinta mucaaradka oo shaaciyey in masuq-maasuq xoogan uu ka jiro hannaanka doorashooyinka.